Dhalinyaro Soomaali ah oo isku dishay Stockholm | Somaliska
Dhalinyaro Soomaali ah oo isku dishay Stockholm
Isbuucaan waxaa magaalada Stockholm ka dhacay dilal isdaba joog ah oo loo geystay 3 dhalinyaro Soomaali ah. Dhacdadaan oo soo bilaabatay habeenkii khamiista ayaa waxaa wiil Soomaali ah lagu dilay xaafada Bromsten oo ku dhow Rinkeby iyadoo habeenkii ku xigay la dilay wiil kale oo la sheegay in uu xiriir la leeyahay dilkii hore, ka dibna xalay ayaa la dilay wiil kale oo isna la sheegay in dilkiisu la xiriiro kuwii hore.
Waxaa sidoo kale la dhaawacay qof kale. Dhacdooyinkaan ayaa dadka qaarkood ii sheegeen in ay xiriir la leeyihiin dhac loo geystay dukaanka Forex Bank ee lacagaha laga sarifto. Dadka ku nool xaafadaha Rinkeby, Rissne iyo agagaarkooda ayaa cabsi weyn la soo daristay, iyagoo qaarkood ay ii sheegeen in ay dareemeen dhacdooyinkii aargoosiga ahaa ee ka dhici jiray Somalia.
Ma ahan markii ugu horeysay ee dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay Sweden, iyadoo ay dhowr isbuuc ka hor ahayd markii magaalada Örebro lagu dhaawacay labo wiil oo Soomaali ah midkalena lagu dilay. Dhacdooyinkaan ayaa intoobada badan la sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxo abaabulan oo dambiileyaal ah.
Maxay u adagtahay in Soomaalidu dhex galaan Swedishka?
Mursal Ciise oo markale loo doortay golaha sare ee xisbiga Miljöpartiet
Maxaad ka taqaanaa biladaha Nobel Prize?
July 27, 2015 at 01:52
Soomaali meel kaste OO joogan group group miyeey wadyaan war alle ka baqa
madhinteen mise wa dhaawac